Isniintii, September 10, 2007 Khamiis, Juun 11, 2015 Douglas Karr
Saaxiib wanaagsan, Pat Coyle, ayaa weydiinaya, Waa maxay Suuqgeynta Is-dhexgalka?
Wikipedia waxay leedahay qeexitaankan soo socda:
Suuqgeynta Is-dhexgalka waxaa loola jeedaa isbeddelka isbeddelka ee suuq-geynta iyada oo suuq-geynta ay ka soo wareegtay dadaal macaamil ganacsi ku saleysan una gudbisay wadahadal. Qeexitaanka suuq geynta isdhexgalka waxay ka timid John Deighton oo ka tirsan Harvard, oo leh suuq geynta isdhexgalka waa awooda wax u qabashada macaamiisha, xusuusnow waxa macaamilku dhahayo oo macaamiisha mar labaad ula hadlaayo qaab muujinaya in aan xasuusano waxa macaamilku noo sheegay (Deighton) 1996).
Suuqgeynta isdhexgalka lama mid aha suuqgeynta internetka, in kasta oo hababka suuq geynta suuqgeynta ay sahleyso tikniyoolajiyadda internetka. Awoodda in la xasuusto waxa uu sheegay macmiilku waxaa la fududeeyay markii aan ka soo ururin karno macluumaadka macaamiisha khadka tooska ah isla markaana aan si fudud ula xiriiri karno macmiilkeenna iyadoo la adeegsanayo xawaaraha internetka. Amazon.com waa tusaale aad u fiican oo ku saabsan adeegsiga suuq-geynta is-dhexgalka, maaddaama macaamiisha ay duubaan dookhooda oo la tuso xulashooyinka buugaagta oo u dhigma oo keliya dookhooda laakiin iibsiyada dhowaanahan.
Bilooyin badan ka hor, qof ayaa i weydiiyay waxa ku kala duwan xayeysiinta iyo suuqgeyntu. Waxaan ugujawaabay sarbeebta kaluumeysiga, anigoo codsanaya in xayeysiintu tahay dhacdada ama dhexdhexaadka, laakiin suuqgeynta ayaa aheyd istiraatiijiyadda. Marka laga hadlayo kalluumeysiga, waxaan soo qaban karaa tiir oo waxaan ku garaaci karaa harada maanta oo aan arki karaa waxa aan qabto. Taasi waa xayeysiinta… iyadoo la ruxaayo dixiriga oo la arko cidda wax qaniineysa. Dhanka kale suuqgeynta waa xirfadleyda kalluumeysatada ah ee baaraya kaluunka, sedka, heerkulka, cimilada, xilliyada, biyaha, qoto dheer, iwm. kalluunka adoo dhisaya istiraatiijiyad.
Xayeysiintu wali qayb ayey ka tahay istiraatiijiyaddaas, kaliya waa dhacdo qarsoodi ah ama dhexdhexaad dhexdeeda ah.
Sannadihii la soo dhaafay, xayeysiinta iyo suuq-geynta labaduba waxay ahaayeen kuwo aan toos ahayn. Waaxda suuqgeynta ama xayeysiinta ayaa noo sheegay waxa laga fikirayo isla markaana aysan dan ka laheyn waxa falcelinteenu ahayd. Waxay xakameeyeen farriinta, dhexdhexaadinta, sheyga iyo qiimaha. Codkayaga kaliya 'wuxuu ahaa' inaan iibsanayno alaabta ama adeegga.
IMHO, Suuq-geynta Is-dhexgalka waa isbeddelka suuq-geynta halkaasoo macaamilku awood u leeyahay, lagu aaminay, isla markaana loo qoro inuu ka caawiyo istiraatiijiyadda. Qiyaas haddii aan fursad u heli lahayn in aan la hadalno kalluunka oo aan aragno sedda ay jecel yihiin iyo goorta ay jeclaan lahaayeen inay wax cunaan. Malaha waxaan ku tuuri lahayn wax wanaagsan balliga si ay uga dhaadhiciyaan asxaabtooda inay la yimaadaan quudinta iyaga marka xigta. (Inteena ugu badan ma dooneyno inaan xoqno oo aan buuxino macaamiisheenna - laakiin waad u jeeddaa bartaas.)
Mar dambe kama sii xakameyno farriintayada ama sumaddayada. Waxaan la wadaagnaa kantaroolkaas macaamilka. Macaamilkaas, inkasta oo uu yahay macmiil faraxsan ama mid xanaaq badan, wuxuu isticmaali doonaa aalado sida internetka si uu ugu sheego asxaabtiisa / saaxiibadeed khibrada ay u leeyihiin badeecadaada ama adeeggaaga. Ka ganacsade ahaan, waxaan u baahanahay inaan hubinno inaan qeyb ka noqon karno wada hadalkaas oo aan ku quudino aragtidooda iyo fikradahooda shirkadahayaga.
Waxaa laga yaabaa in isbarbardhig dhow uu noqon doono dib u eegista shaqaalaha ee shalay iyo Dib u eegista shahaadada 360 ee maanta. Hal dhibic oo ka mid ah shaqooyinkayaga, waxaan si aamusnaan ah u sugi lahayn inaan helno dib-u-eegistayada. Dib-u-eegista ayaa na qiimeyn doonta isla markaana bixin doonta yoolal, bogaadin iyo dhaleeceynno in nalala xisaabtami doono illaa iyo inta dib-u-eegistayada dambe ah. Dib-u-eegista 360 aad ayey uga duwan tahay… yoolalka, amaanta iyo dhaleeceynta ayaa laga wada hadlay oo laga qoray labada dhinac ee miiska. Horumarka iyo guusha shaqaalaha waxaa lagu qeexay la-talinta iyo hoggaaminta maareeyaha ama kormeeraha - laakiin si fudud isaga / iyada looma qeexin.
Shirkaduhu waxay u arkeen 360 dib u eegis inay si aad ah u faa'iido badan yihiin maxaa yeelay waxay ka caawineysaa maareeyaha inuu noqdo hoggaamiye ka wanaagsan sidoo kale wuxuu iyaga siiyaa aragti ay shaqsiyan ula shaqeeyaan qofkaas shaqaalaha ah. (Ma jiraan laba shaqaale oo isku mid ah - sida badan oo aysan jirin laba macmiil oo kale!). Suuqgeynta is-dhexgalka kama duwana. Marka la dhiso istiraatiijiyado ay ku jiraan codka macaamiisheenna oo aan ka faa'iideysanno, waxaan horumarin karnaa suuqgeyntayada si aad u ballaaran.
Halka aan ku turunturoodo Suuqgeynta Is-dhexgalka ayaa ah in si uun ay 'waqti ugu jirto' in ay dhaqan gashay. Waan jeclahay qeexitaanka Wikipedia maxaa yeelay waxay tilmaamaysaa inaysan u baahnayn an online istaraatijiyad. Waxaan aaminsanahay in Suuqgeynta Isdhexgalka si wanaagsan looga wada isticmaalay dhexdhexaadiyayaal badan in muddo ah. Anigu shakhsiyan ma aaminsani inay ahayd ifafaale Internet. Sidee sahanka tooska ah ee waraaqdu uga duwan yahay sahanka emaylka? Haddii shirkaddu u adeegsato xogtaas la helay inay si fiican ugu adeegto macaamiisheeda ama ay soo jiidato kuwa cusub, waxaan aaminsanahay inay taasi tahay Is-dhexgal sida shabakad bulsheed oo internetka ah.
Kafaala: Codso Waxyaabaha Ku guuleysta ee qaar ka mid ah 350,000 Dhiirrigelinta emaylka ee Suuqgeynta Emailkaaga Own
Oo Daawac Natiijooyinkaaga oo Kaliya 3 Maalmood oo Kaliya. Riix Halkan!
Tags: qeexidsuuq geyntaereyada
Jun 6, 2009 at 4: 47 PM
Tani waa runtaa sites bogag aad u tiro yar oo runti is dhexgal ah. Taasi waa sababta ay shirkaduhu u raadinayaan warbaahinta bulshada si ay u xalliyaan arrinta. Waa 'meel saddexaad' ammaan ah. Ma aaminsani in shirkaduhu ay gaarayaan ilaa iyo inta ay ka maamulayaan shabakadooda bulshada - waxaan aragnay taas inay ku fashilmeen. Waxaan aaminsanahay inay ku abuurayaan wada hadal bogooda.
Oktoobar 7, 2013 at 8:45 AM
waxaan jeclaan lahaa inaan u soo bandhigo shirkadeyda suuq geyn is-dhexgal ah. marka Douglas fadlan waan ku qanacsanahay haddii aad i tustid sida loo bilaabo… ..?
Jun 29, 2010 saacadu markay ahayd 11:37 AM
Mahadsanid Doug… xigashadaada: "Xayeysiintu waa dhacdada ama dhexdhexaadka, laakiin suuqgeynta ayaa ahayd istiraatiijiyadda" ma dhihi karnaa Suuqgeynta waa istiraatiijiyad xayeysiintuna waa adeegsi ka mid ah ?? 🙂